Na-achọpụta WordPress Permalinks | Martech Zone
Na-achọpụta WordPress Permalinks
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 23, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Mgbe mbụ m malitere blọọgụ, ahọrọ m ọkọlọtọ Permalink Ọdịdị nke gụnyere ụbọchị, ọnwa na ụbọchị nke post:
Ka blọọgụ m na-ewu ewu ma mụtakwuo banyere njikọta njikọ, achọpụtara m na usoro a nwere ike inwe ụfọdụ ọghọm:
Ndị na-eme nchọpụta nwere ike ịchọpụta ozugbo ma ọ bụrụ na post blọọgụ ochie ma ọ bụ na nso nso a. Onye choro iguta ihe ochie mgbe ihe ohuru di? Ọ bụrụ na ndị na - eme nchọpụta ga - ahụ ụbọchị dị na nhazi ahụ, ha nwere ike ileghara ihe ochie gị anya n'agbanyeghị na ha ka bara uru.
Expertsfọdụ ndị ọkachamara njikarịcha nchọta kwenyere na onye ọ bụla na-ekewapụta ihe (“/”) bụ ihe na-egosi ọkwa nchekwa folda yabụ karịa slashes, obere ihe dị mkpa ọdịnaya gị ga-adị (slashes ndị ọzọ pụtara na e liri ya n’ime nchekwa folda). Ọ bụrụ n’ịnwere ike idobe ọkwa ọ bụla na otu edemede, ọ na - ahazi ọdịnaya ahụ ogo abụọ n’ọkwá… pụtara na ọ ga - adị mkpa karịa.
Ndị ọkachamara SEO ndị ọzọ kwetakwara na iji Keywords dị na edemede bụ ezigbo ụzọ njikarịcha search engine. Jide n'aka na ị kpọrọ aha gị iji tinye isiokwu ma ọ bụ ahịrịokwu dị mma, agbanyeghị!
Nwere ike igbanwe Permalink Structure?
Ruo oge ụfọdụ, ọ bụ ezie na enwere m nsogbu na usoro permalink m bidoziri blọgụ m… ọ bụghị ikpe ahụ! Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgbanwe usoro ọrụ permalink ahụ, Dean Lee ewepụtala ngwa mgbakwunye nke na -emepụta ihe ntụgharị 301 na-akpaghị aka iji gbanwee site na otu ụdị nke permalink gaa na nke ọzọ.
Ngwunye ngwugwu dị egwu yana sistemụ njikwa njikwa siri ike bụ WPEngine (Nke ahụ bụ njikọ njikọ anyị). Anyị nwere mepụtara ngosipụta oge niile maka ọtụtụ ndị ahịa anyị ka ha nwee ike ijigide ụfọdụ ikike njikwa njikwa ha na peeji ndị a kwagara.
Ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze dị njikere itinye ego na mgbasa ozi mmekọrịta
Ezigbo ego, Doug. M na-eche mgbe niile na WordPress na-akpaghị aka edozi redirects (dị ka Drupal). Echere m na m hiere ụzọ. Daalụ maka ịkọwa ngwa mgbakwunye a bara uru. Ugbu a, m na-eche ma m ga-agaghachi na usoro njikọ saịtị m.
Aug 24, 2009 na 2:48 PM
Nnukwu ego, dị ka mgbe niile, Doug.
Aug 24, 2009 na 4:43 PM
Daalụ maka ịkekọrịta ozi a Douglas!
Aug 28, 2009 na 2:25 PM
Ezigbo Ama. Emeela m ihe a na blọọgụ m… Kedụ otu ị ga - esi akọwa ụdị nke ejiri na permalink ma ọ bụrụ na ịhọrọ karịa otu edemede maka ọkwa?
SSL dị ọnụ ala
- Site na ndozi na WordPress 3.3 ọ baghịzi mkpa iji bido nọmba permalink gị. M na-eme ihe na% / postname% Ọdịdị bụ nhọrọ kachasị mma maka ịbawanye ọ bụ ezie, n'ihi na ị nwere ike ibugharị posts / ibe na ngalaba dị iche iche na-enweghị nsogbu gbasara nsogbu ọ bụla.
Asambodo SSL dị ọnụ ala
Feb 23, 2012 n’elekere 2:21 nke abali
Izizi, ka m kelee gị maka ịkekọrịta isiokwu dị oke mkpa gbasara ịde blọgụ azụmahịa na nke abụọ isi gị gbasara ọghọm nke njikọ njikọ dị ezigbo mma. Anyị na-akpali akpali na edemede gị ma ugbu a anyị kwenyere na permalink Ọdịdị dị irè n'ezie iji nweta mmasị ndị na-enyocha na mmasị ha.